वीरमा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकुमा गरिएको परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको वीरका डा. विद्यानिधि पौडेलले जानकारी दिए ।
चन्द्रगिरी नगपालिका, सतुंगलकी ३४ वर्षीया महिलालाई निमोनिया भएको भन्दै आइतबार अस्पताल लगिएको थियो । तर उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण गरिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस को हुन् शुक्रबार बिहानै थपिएका ९ जना कोरोना संक्रमित ?
ट्याग्स: राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, वीर अस्पताल